Vaovao - Arahabaina amin'ny fahombiazan'ny fikosoham-taratasy tanora any Malezia.
Arahabaina noho ny fahombiazan'ny fikosoham-taratasy tanora tany Malezia.
Vao tsy ela akory izay, ny hafainganam-piasan'ny milina taratasy Taizhou Forest 5200 dia mahatratra 900m / min ary mahomby amin'ny fandidiana. Ny elemetents an'ny dewatering rehetra dia noforonin'i SICER.
Miaraka amin'ny Taizhou Forest Paper Company, SICER dia manolotra singa mandrehitra 5.9m ho an'ny milina taratasy mifono felotra 5200/900 mifangaro. Ary ity tetikasa ity dia nanjary dingana lehibe ho an'ny SICER miditra amin'ny faran'ny milina taratasy haingam-pandeha any Sina. Ny hafainganam-pandeha farany vitany dia 921 m / min, ary nahomby tamin'ny fanapahana ny ampihimamba vahiny. Vokatr'izany, ny vokatra avoakany isan'andro dia nihoatra ny 1.000 taonina, ary ny androm-piainan'ny tariby ampiasaina dia hatramin'ny 125 andro, ary maharitra 38,9% raha oharina amin'ireo marika vahiny misy tetikasa mitovy amin'izany, nahatratra vokatra mahavariana be. Ny fanoloana ireo vokatra nafarana dia mitondra tombony lehibe ara-toekarena sy sosialy koa.
Ny faritra anaovan'i SICER vita amin'ny seramika dia namboarina tamin'ny tsipika famokarana an-jatony milina haingam-pandeha haingam-pandeha, ary ny sakany dia mihoatra ny 6.6m ary ny hafainganam-pandeha hatramin'ny 1,300 m / min. Miorina amin'ny tsena avo lenta eto an-toerana, ny SICER dia manamafy ny fiaraha-miasa amin'i Voith, Valmet, Kadant sns, lasa mpamatsy fitaovana amin'ny papermaking ao Shina.
Misaotra an'i Taizhou Forest tamin'ny fahatokisany ireo marika anatiny. Ary misaotra anao nampiasa ny fitantanana tsara sy ny haitao mahatalanjona hananganana sehatra tonga lafatra ho an'ny marika eto an-toerana.
Ny zava-misy dia manaporofo indray fa ny mpanamboatra sinoa sy sinoa dia afaka mamolavola, mamokatra ary miasa milina taratasy haingam-pandeha malalaka!